"संसदीय समिति : दादागिरी देखाउदै निरीह बनाउ खोजे मन्त्रीले"
काठमाडौं, असोज । संसदीय समितिले सामान्यतया सरकारलाई गलत काम भए सही गर्नका लागि निर्देशन दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समिति शक्तिशाली हुने गर्छ । तर सँधै त्यस्तो नहुने रहेछ ।
असोज १८ गते बिहीबारको दृष्य अरु समयको तुलनामा फरक रह्यो । त्यो समय संसदीय समिति निरीह र सरकारका मन्त्रीको दादागिरी स्पष्टै बाहिर आयो । संसदीय समितिमा मन्त्री उत्तरदायी भएर होइन, गुण्डा जस्तो दादागिरी गर्दै प्रस्तुत भएको बैठकमा देखियो ।
विकास समिति सभापति कल्याणी खड्काले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्तिबारे विषयमा बोल्दै गर्दा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बीचमै रोकेर आफ्नो आपत्ति राखेर त्यस्तै रुपमा प्रस्तुत भए ।
मन्त्री बास्कोटाले एउटा विषयमा छलफल गर्ने अनि अर्को विषयमा निर्देशन दिने काम कसले गर्यो भनी पड्किए । त्यस लगत्तै उनले समितिलाई निर्देशन दिएरै निर्णय नै उल्टाउन लगाए । समिति शक्तिशाली कि मन्त्री ? त्यो पनि समितिकै बैठकमा ?
उनले समितिलाई पाठ पनि पढाए । सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी कार्यक्रमबारे कुरा बुझ्न समितिले मन्त्री बास्कोटालाई बोलाएको थियो ।
त्यहाँ सांसदहरूले नेपाल टेलिकमको वेथितिबारे असुन्तुष्टि जनाएका थिए । तर मन्त्री बास्कोटाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो निर्णय सुनाए । \_ मन्त्रीले सभापतिलाई निर्णय प्रक्रियामा रोक्नु संसदीय सर्वोच्चताको उल्लंघन हो । समिति सभापतिले मन्त्रीको हस्तक्षेप रोक्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।